DHUUSAMAREEB - Wararka aan ka helayno magaalada Dhuusamareeb ayaa sheegaya in dib u dhac uu ku yimid Shirkii lagu dhameystiri lahaa Heshiiska Galmudug iyo Ahu Sunna.
Shirka oo la filayay inuu maanta ka furmayo xarunta Madaxtooyada magaaladaasi ayaa la shaaciyay inuu dib u dhacay, iyadoo sababtuna lagu sheegay arrimo farsamo iyo Wafuud la casuumay oo wali aan imaan.
Madaxda la sugayo waxaa ka mid ah Madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali "Gaas" oo ay shalay diyaaradii qaadi laheyd ee UN-ka ay is khilaafeen iyo Madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe.
Safarka Cabdiweli Gaas ee Dhuusamareeb ayaa baaqday kadib markii isaga iyo wafdigii la socday ay aqbali waayeen inay u hogaansamaan shuruucda Diyaaradaha UN-ka, iyagoo diiday in la baaro. Halkan ka akhri.
Madaxweyne Axmed Madoobe ayaa isna ka cudur-daartey shirka ka qeybgalkiisa, isagoo sheegay inuu ku mashquulsan yahay Shaqooyin deegaanka ah, sida lagu baahiyay qoraal kasoo baxay Madaxtooyada.
Labada hogaamiye ayaa kamid ah 5ta Madaxweyne dowlad goboleed ee ku midoobey shirkii lagu qabtey Kismaayo October, kaasi oo ay ku sameysteen Madal Cabdiweli Gaas gudoomiye loogu doortey.
Wararka Warsidaha Garowe Online uu ka helayo Illo lagu kalsoon yahay ayaa sheegaya in Cabdiweli Gaas iyo Axmed Madoobe ay maanta tagi doonaan Dhuusamareeb.
Dowladda Soomaaliya ayaa siisay Maamul goboleedyada dalka Fursad muhiim ah...